War-saxaafadeedka SONYO “Waa In Xukuumaddu Xididada u Siibtaa Shabakadaha Tahriibiya Dhalinyarada” | Salaan Media
Home Community War-saxaafadeedka SONYO “Waa In Xukuumaddu Xididada u Siibtaa Shabakadaha Tahriibiya Dhalinyarada”
War-saxaafadeedka SONYO “Waa In Xukuumaddu Xididada u Siibtaa Shabakadaha Tahriibiya Dhalinyarada”
New york(SM) June19, 2013Dallada Dhalinyarada Heer Qaran ee Jamhuuriyada Soomaaliland ee SONYO ayaa wal-wal iyo walaac xoogleh ka muujisay Tahriibta da’yarta dalku ay ku le’deen oo gaadhay halkii ugu saraysay ee abid ka gaadho Somaliland.
SONYO waxay sidoo kale xukuumadda talada haysa ee Somaliland, Waalidiinta iyo bulshaddaba ugu baaqday inay iska kaashadaan sidii wax looga qaban lahaa aafada Tahriibta ee dalka ku habsatey, kuwaas oo sidoo kale xukuumadda ugu baaqay inay wada-shaqayn dhaw kala yeelato joojinta Tahriibta dawladda Ethiopia.
Dallada Dhalinyarada Heer Qaran ee Jamhuuriyada Soomaaliland ee SONYO waxay Tacsi Tiiraanyo leh u direen dhamaan Qoysaskii, Asxaabtii iyo bulshadda Somaliland ee ay ka baxeen dhamaan dhalinyaradii ku naf-waayey Tahriibta faraha ka baxday, kuwaas oo ku taliyey inaan la dhayalsan qadiyadaas.
Waxa sidaas lagu sheegay Warsaxaafadeed uu ku saxeexan yahay Gudoomiyaha Dallada Dhalinyarada Heer Qaran ee SONYO Mubarig Ismaaciil Taani oo uu soo saaray, kaas oo isaga oo dhamaystiran u dhignaa sidan:-
“Tahriibka dhalinyarada JSL ayaa noqday masiibo qaran oo haligta dhalinyarada JSL qarnigan 21aad. Dhalinyarada JSL oo war-war ka qaba dihnaanta mustaqbalka, leeleel iyo ladnaan midkuu u sido, iyo waayaha mustaqbalku ku qaabili doono dalkooda hooyo, ayaa raxan raxan maalin walba uga suudala dalka, una badheedha saxare kulayl badan oo baaxad leh iyo badweyn aan lahayn geed la cuskado. Waxa sii kordhaya qul-qulka dhalinyarada tahriibaysa, una suudalaysa dhul iyo gayi ayna xoq badan ka haynin, iyaga oo miidaaminaya noloshooda.
Dallada Dhalinyarada Heer Qaran ee Jamhuuriyada Soomaaliland ee SONYO, oo wal-wal iyo walaac balaadhan ka qabta tahriibka dhalinyarada dalka JSL oo sii kordhaya oo gaadhay heerkii ugu sareeyey ee abid uu gaadho tahriibku, waxay tacsi tiiraanyo iyo murugo badan leh u diraysaa dhalinyarada JSL iyo qaranka dhammaantii, gaar ahaan waalidkii ubadkoodii ku haligmeen doonyaha dhawaan qarqoomay. Waxaanu leenahay dhalinyaradu waa xoogii iyo dhuuxii dalka, geeridooduna waa laf-jabkii dalka hooyo.
Korodhka tahriibka iyo sibiq dhaqaaqa dhalinyarada JSL oo halacsanaya nolol dhalaan habaabis iyo dhalanteed ah, waxa qaybta ugu wayn ka qaatay shabakad aboolayaal ah oo tahriibiya dhalinyarada, kuna macaasha surmiga iyo shalaqsiga dhiiga dhalinyarada iyo ilmada ka tif leh waalidkii dhalay. Waxaanu ku baaqaynaa:
1.In Xukuumada JSL gacan bir ah ku qabato, xididadna u siibto, waxa ka hadhay inta la qab-qabtay mooyee, shabakadaha aboolayaasha ah ee tahriibiya dhalinyarada JSL, oo ah shabakado dambiilayaal ah oo ku macaasha geerida iyo diihaalka dhalinyarteena. Dallada Dhalinyarada Heer Qaran ee SONYO-yana waxa ay gacan buuxda ku siin doontaa arintan dawlada sidii ay horeba u siisay, si loo xaqiijiyo cidhib tirka shabakadahan.
2. In Xukuumada JSL iskaashi dawliya kala samayso dalka Ethiopia cidhib tirka shabakadahan tahriibiya dhalinyarada wixii ka baxsan xuduudka JSL.
3.In waalidku ka warhayo waxa laabta ubadkooda kohanayso, wacyi fiicana ka siiyo khatarta dhabta ah ee tahriibta, ka hor intaanu ilmuhu u xadhko xidhan tahriib.
4.Waxaanu ugu baaqaynaa dhalinyarada JSL in ay ka dhawrsadaan khatarta Tahriibka.
5. Waxa kale oo aanu ku boorinaynaa Shacbi weynaha Jamhuuriyada Somaliland in dhan looga soo wada jeesto bad-baadinta dhalinyarada JSL”.